एमाले दैलेखका बेनामे महाशयका नाममा खुल्ला पत्र | Jwala Sandesh
एमाले दैलेखका बेनामे महाशयका नाममा खुल्ला पत्र
| प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २३, २०७३ ::: 284 पटक पढिएको |
दैलेख जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने सिहाँसैन गाविसमा जन्मेका एमाले यूवा नेता हुन तेजबहादुर महतारा । नेमकिपाबाट चुनाव जितेर गएका विनोद कुमार शाह, राजबहादुर बुढा लगायत दैलेख जिल्ला कमिटिबाट बहुमत बढि सदस्यहरु एमालेमा प्रवेश गरेदेखि आजसम्म करिब २० वर्षको लामो त्याग र तपस्या पश्चात एमालेको केन्द्रिय विभागमा जिम्मेवारी पाएका ब्यक्ति हुन तेजबहादुर महतारा । उनले अहिले सम्म पार्टीमा गरेको लगानी, त्याग र तपस्यालाई हेर्नेहो भने निसँगै राजनीति सुरु गरेका मध्ये कतिले त सभासद नै पटकाए भने कतिले केन्द्रीय विभाग या लाभजन्य पदहरुमा बसेर पुराना, दक्ष तथा सदैव पार्टीकालागि इमान्दार बन्दै आउका यूवाहरुलाई ओझेलमा पार्दै गए । फलस्वरुप यसपटक उनले एमाले केन्द्रीय कमिटिबाट न्याय पाएकाछन् । पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी, आफ्नाहरुलाई अगाडी ल्याउने पचलनका बाबजुद लामो समयपश्चात पार्टीले गरेको न्यायलाई समेत बदनाम हुनेगरि अनलाइन खबरमा तेजबहादुर महतारा र उपेन्द्र नेपालीले दैलेख एमालेमा खासै केहि नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ ।
त्यो आरोप लगाउनेहरुको नाम प्रस्ट भएको भए म असाध्यै आभारी हुने थिए । को महासय हुन त तिनी ? जसले एमालेमा लामो योगदान गरेका रहेछन । दैलेख जिल्लाका दुवै नगरपालीका र ४९ ओटै गाविसले उनलाई चिन्दो रहेछ । अझ भनौँ दैलेख एमाले आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्न उहाँ एक्लैले यतिविध्न मेहनत गर्नुभएको रहेछ । सलाम छ बेनामे महाशय ः
अन्त्यमा यूवाहरुले गरेको योगदान कसैले पनि अवमूल्यन गर्नुहुदैन । आज जसरी दैलेखमा एमालेको बर्चस्व कायम छ यसलाई जोगाउन तपाइ जस्ता महाशयको बसको कुरा होइन । यहाँलाई दुःख लाग्ला तर दैलेख एमालेलाई यो स्थानसम्म ल्याउन म जस्ता हजारौ यूवाहरुको योगदान छ । जति यहाँले योगदान गर्नुभएको छ । त्यति नभएपनि ६४ साल पछिका हरेक चुनावमा हामी प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी बनेका हौँ । चगत्रा बजारमा हतियारधारीहरुको आक्रमणमा पर्ने पनि हामी नै हौँ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ।
अनि दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि चोट खानेहरु हामी नै होँ । न त तपाइ जस्ता नेताहरुले केहि सान्तवना दिनुभयो न त पार्टीबाट प्रेस विज्ञप्ती सम्म निकालेर विरोध जनाउन आवश्यक ठान्नुभयो । तसर्थ महासय, आफू मात्रै ठूलो हुँ भन्ने खालका भ्रमहरु त्याग्नुहोस । सबैको अस्तित्वलाई स्विकार्नुहोस । भोली चुनावमा तपाइ आएपनि जिताउने त हामी ने हौँ नि होइन र ? यसरी लामो समयपश्चात पार्टी केन्द्रले दिएको जिम्मेवारी स्विकार्न नपाउदै मिडियामार्फत अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन मरिहत्या नगर्नुहोस । तपाइले कहिल्यै पश्चिम दैलेखका कार्यकर्ताहरु पार्टीमा अगाडी नआउन भन्ने चाहनुहुन्छ । त्यो कुरा मलाइ उहिल्यै जमानामा थाहा थियो । तसर्थ कमरेड वेरोजगार यूवा, सक्षम यूवा तेजबहादुर महतारा प्रति डाहा नगर्नुहोस । उनले आफ्नै सम्पत्ती समाप्त पारेकाछन राजनीतिको नाउमा । यहाँहरुले जस्तो बजारमा महल ठड्याएका छैनन । तसर्थ यहाँ दैलेखमा जति पनि एमालेमा आवद्व यूवाहरु छन कसैलाइृ नहोच्याइयोस महासय…
याे लेखककाे व्यत्तिगत विचार हाे